functional အထည်အလိပ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM- fabricbackpacks.com
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> functional အထည်အလိပ်
Our company ပေးဝေနေနှင့် Exporting, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြု functional အထည်အလိပ်, အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့သူတို့အပေါ်မှာမကယ်မလွှတ်ကျွန်တော်တို့၏အာရုံစူးစိုက်ဖြစ်ဘူးပြီ ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုညောနှင့်အတူအချိန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုအကျယ်ဆုံးအကွာအဝေးထုတ်ကုန်များကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏နေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွဲ, ဖြန့်ဖြူး, ဝယ်လက်, အေးဂျင့်များနှင့် OEM / နှစ်ဖွဲ့မှ Enquiry ကြိုဆိုဖြစ်ကြသည်။
FF 11-1 : functional အထည်အလိပ်
FF 11-2 : ရေစိုခံအထည်အလိပ်
ကျနော်တို့အမြှေးပါးအမျိုးမျိုးရှိတယ်/ရုပ်ရှင်/တိကျတဲ့ရေ colume လိုအပ်ချက်ရောက်ရှိဖို့ coating.ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးအပေါ်ယံပိုင်းစနစ်,ကျနော်တို့ 500 ကနေရေစိုခံအထည်အကွာအဝေးပူဇော်နိုင်ပါတယ်-15,000mmH2O.
FF 11-3 : ပွန်းပဲ့ကိုခံနိုင်ရည်အထည်အလိပ်
FF 11-4 : ခရမ်းလွန်ကာကွယ်အထည်အလိပ်
ခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှုပြင်ပတွင်ထည်များအတွက်အရေးကြီးသောအချက်များကိုတစ်ခုဖြစ်တယ်.ကျွန်ုပ်တို့၏ခရမ်းလွန် 500 နာရီကြာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်,800 နာရီ,က ISO 4892 နေဖြင့် 1500 နာရီအပြီး 1000 နာရီနှင့် 1500 နာရီစံက ISO အားဖြင့် 105 B02 သို့မဟုတ်အဆင့် 4-2.သာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80 နာရီကြာသည့်အပိုင်းအစဆိုးထည်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်.မြင့်မားသောခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှုထည်တဲ၌အသုံးပြုရန်အတွက်သင့်လျော်သည်,အဖုံး,ကျောပိုးအိတ်စသည်တို့ကို.
FF 11-5 : Breathable အထည်အလိပ်
Breathable ထည်ကောင်းသောရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ breathability နှစ်ဦးစလုံး၏ဂုဏ်သတ္တိများပေါင်းစပ်,outwear များအတွက်စံပြအရာဖြစ်ပါသည်,ပြင်ပတွင်,ဆေးဝါးနှင့်မိုးကာအင်္ကျီစသည်တို့.ဒါဟာအစ windproof သည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်ရရှိနိုင်,ပုံစံများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ.
FF 11-6 : အပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်း
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော TPU အဖြစ်အင်္ကျီကိုပစ္စည်းအမျိုးပေါင်းကမ်းလှမ်း,PU,ဗီနိုင်း,31-P ကိုအခမဲ့.ယင်း၏ function ကိုနှင့်အသုံးပြုမှုအရ,ကွဲပြားခြားနားသောအထူနှင့်ရေစိုခံလိုအပ်ချက်တောင်းဆိုချက်အရအပေါ်သို့ရရှိနိုင်ပါသည်.